Jona Akadzidza Kuva Nengoni paaiva kuNinivhi | Kutenda Kwechokwadi
Akadzidza Kuva Nengoni
1. Jona aifanira kufamba rwendo rwakadini, uye ainzwa sei nezvekwaaienda?
JONA aizova nenguva yakawanda yekufunga. Aifanira kufamba kwemakiromita anodarika 800, daro raizomutorera unenge mwedzi, zvimwe kutopfuura. Kutanga, aifanira kusarudza kuti odimburira here kana kuti otora nzira yakareba asi isina ngozi obva afamba achipfuura nemumipata uye nzira dzakawanda dzemumakomo. Angangodaro aifanira kunyenyeredza Renje rakakura reSiriya, kuyambuka nzizi dzakadai serwizi rukuru rwaYufratesi, uye kutsvaka pekurara kuvanhu vaakanga asingazivi mumataundi uye mumisha yaiva muSiriya, Mesopotamiya neAsiriya. Jona zvaaiswedera pedyo neNinivhi kunetseka kwaaiita kwaiwedzera.
2. Jona akanga adzidza sei kuti aisagona kutiza basa raakanga apiwa?
2 Pane chimwe chinhu chainyatsozivikanwa naJona: Aisagona kutiza basa iri raakanga apiwa. Akanga ambozviedza. Sezvatakaona muchitsauko chakapfuura, Jehovha akava nemwoyo murefu pakudzidzisa Jona achishandisa dutu mugungwa uye kumununura zvinoshamisa achishandisa hove huru. Papera mazuva matatu, Jona akarutsirwa pamhenderekedzo ari mupenyu. Iye zvino akanga awedzera kuva munhu anoteerera uye anozvininipisa.—Jona, zvits. 1, 2.
3. Jehovha akaratidza Jona unhu hupi, asi mubvunzo upi unovapo?
3 Jehovha paakatuma Jona kuNinivhi kechipiri, muprofita wacho akaita sezvaakanga audzwa ndokunanga kumabvazuva parwendo urwu rurefu. (Verenga Jona 3:1-3.) Zvisinei, pashure pekunge Jehovha amuranga, Jona akanyatsochinja here? Somuenzaniso, Jehovha akanga amuratidza ngoni, achimununura kuti asanyura, achirega kumurangira kupanduka kwake, uye achimupa mumwe mukana wokuti aite basa iri. Pashure pezvose izvi, Jona akanga adzidza kuratidza vamwe ngoni here? Kudzidza kuratidza ngoni kunowanzoomera vanhu vasina kukwana. Ngationei kuti tingadzidzei kubva pakunetseka kwakaita Jona.
Mashoko Okutonga Uye Kuchinja Kunoshamisa
4, 5. Nei Jehovha akataura nezveNinivhi se“guta guru,” uye izvozvo zvinotidzidzisei nezvake?
4 Jona akanga asingaoni Ninivhi sezvaiita Jehovha. Tinoverenga kuti: “Zvino Ninivhi rakanga riri guta guru kuna Mwari.” (Jona 3:3) Katatu, nyaya yaJona inoratidza mashoko aJehovha achitaura nezve“Ninivhi guta guru.” (Jona 1:2; 3:2; 4:11) Nei guta iri raiva guru, kana kuti raikosha kuna Jehovha?
5 Ninivhi raiva guta rekare, rimwe remaguta ekutanga akavakwa naNimrodhi pashure peMafashamo. Raiva guta guru raiita seraisanganisira mamwe maguta anoverengeka, uye zvaida mazuva matatu kuti munhu arifambe kubva kune rimwe divi kusvika kune rimwe. (Gen. 10:11; Jona 3:3) Guta reNinivhi raiyevedza, raiva netemberi dzakanaka, masvingo akasimba uye zvimwe zvivako zvakakura uye zvakanaka. Asi hapana kana chimwe chezvinhu izvi chaiita kuti guta racho rive rinokosha kuna Jehovha Mwari. Chaikosha kwaari vaiva vanhu vacho. Ninivhi yaiva nevanhu vakawanda kupfuura mamwe maguta. Pasinei noupi hwevanhu vacho, Jehovha aiva nehanya navo. Anokoshesa upenyu hwemunhu uye zvinokwanisa kuitwa nemumwe nemumwe kuti apfidze uye adzidze kuita zvakarurama.
Jona akaona Ninivhi riri guta guru rakazara uipi
6. (a) Nei Jona angangodaro akaona guta reNinivhi seraityisa? (Onawo mashoko omuzasi.) (b) Tinodzidzei nezvaJona pabasa rekuparidza raakaita?
6 Jona paakazopinda muNinivhi, vanhu vemo vainge vakawanda avo vaipfuura 120 000 vangangodaro vakaita kuti nzvimbo yacho itowedzera kutyisa. * Akafamba kwezuva rose kusvikira asvika kunzvimbo yaiva nevanhu vakawandisa kupfuura dzimwe muguta racho, zvimwe achitsvaka nzvimbo yakakodzera kuti atange kuparidza mashoko ake. Aizotaura sei nevanhu ava? Akanga adzidza mutauro wechiAsiriya here? Kana kuti Jehovha akaita chishamiso chokuti akwanise kuutaura here? Hatizivi. Kungangodaro kuri kuti Jona akataura mashoko ake nomutauro wake wechiHebheru ndokushandisa muturikiri kuti ataurire vaNinivhi mashoko acho. Chero zvazvingava, mashoko ake aiva mashoma uye kunenge kuti aisazoita kuti vanhu vamufarire. Akati: “Kwangosara mazuva makumi mana, uye Ninivhi richaparadzwa.” (Jona 3:4) Akadzokorora adzokororazve mashoko aya noushingi. Nokuita izvi, akaratidza ushingi nokutenda zvinoshamisa, izvo vaKristu mazuva ano vanofanira kuva nazvo kupfuura kare kose.
Mashoko ake aiva mashoma uye kunenge kuti aisazoita kuti vanhu vamufarire
7, 8. (a) VaNinivhi vakaita sei pavakanzwa mashoko aJona? (b) Mambo weNinivhi akaita sei paakanzwa nezvemashoko aJona?
7 VaNinivhi vakawanda vakateerera mashoko aJona. Hapana mubvunzo kuti angangodaro akafunga kuti vanhu vacho vaizotsamwa uye vaizoita mhirizhonga. Panzvimbo pezvo, chimwe chinhu chinoshamisa chakaitika. Vanhu vakateerera! Mashoko ake akakurumidza kupararira. Pasina nguva, guta rose rakanga rava kutaura nezveuprofita hwaJona hwokuparadzwa kweguta racho. (Verenga Jona 3:5.) Vapfumi nevarombo, vane simba nevasina, vaduku nevakuru vose vakapfidza. Vakarega kudya. Pasina nguva mashoko eizvi zvakanga zvasarudzwa nevakawanda akasvika munzeve dzamambo.
Jona aifanira kuva neushingi nekutenda kuti aparidze muNinivhi
8 Mambo wacho akapfidzawo paakanzwa mashoko aJona. Abatwa nokutya Mwari, akasimuka pachigaro chake cheumambo, akabvisa nguo dzake dzakanaka dzeumambo, akapfeka masaga seakanga akapfekwa nevanhu vake, uye ‘akatogara pasi mumadota.’ Mambo ne“vakuru vake,” kana kuti vanokudzwa, vakapa murau wakaita kuti kutsanya kwakanga kwatangwa nevanhu kuitwe zvepamutemo. Akarayira kuti vanhu vose vapfeke masaga, kunyange zvipfuwo. * Akabvuma achizvininipisa kuti vanhu vake vaiva nemhosva yokuita zvakaipa uye chisimba. Achiratidza tariro yokuti Mwari wechokwadi aizoratidza ngoni paaiona kupfidza kwavo, mambo wacho akati: ‘Mwari angadzora kutsamwa kwake kukuru, kuti tirege kuparara.’—Jona 3:6-9.
9. Vatsoropodzi vakati chii chavasina chokwadi nacho nezvevaNinivhi, asi tinoziva sei kuti vatsoropodzi vacho vakarasika?
9 Vamwe vatsoropodzi vanoti havana chokwadi kuti vaNinivhi vaigona kunge vakakurumidza kupfidza zvakadaro. Zvisinei, nyanzvi dzeBhaibheri dzakaona kuti kuchinja kwakadaro kwaienderana nokutenda mashura uye kusatana kuchinja kwevanhu vetsika dzakadaro munguva dzekare. Uyezve, tinoziva kuti vatsoropodzi vakadaro vakarasika, nokuti pave paya Jesu Kristu pachake akazotaura nezvokupfidza kwevaNinivhi. (Verenga Mateu 12:41.) Jesu aiziva zvaaitaura, nokuti aiva mupenyu ari kudenga achiona zviitiko izvozvo zvichiitika. (Joh. 8:57, 58) Chokwadi ndechokuti hatimbofaniri kufunga kuti hazviiti kuti vanhu vapfidze—pasinei nokuti vangaratidzika kuva vakaipa zvikuru. Jehovha chete ndiye anogona kuziva zviri mumwoyo wemunhu.
Kusiyana Kwengoni dzaMwari Nematongero Evanhu Asingachinji
10, 11. (a) Jehovha akaita sei nekupfidza kwevaNinivhi? (b) Nei tingava nechokwadi chokuti paisava nechikanganiso pakutonga kwaJehovha?
10 Jehovha akaita sei nekupfidza kwevaNinivhi? Jona akazonyora kuti: “Mwari wechokwadi akaona mabasa avo, kuti vakanga vatendeuka panzira yavo yakaipa; naizvozvo Mwari wechokwadi akazvidemba pamusoro pedambudziko raakanga ataura kuti aizovaunzira; akarega kuriunza.”—Jona 3:10.
11 Izvi zvinoreva here kuti Jehovha akafunga kuti paiva nechikanganiso pakutonga kwaaida kuita Ninivhi? Kwete. Bhaibheri rinotsanangura kuti kururamisira kwaJehovha kwakakwana. (Verenga Dheuteronomio 32:4.) Jehovha akaona kuti aisafanira kuramba akatsamwira vaNinivhi. Akacherechedza kuti vanhu ivavo vakanga vachinja uye akaona kuti kuranga kwaaida kuvaita kwakanga kusisina kukodzera. Iyi yaiva nguva yekuti Jehovha aratidze ngoni dzake.
12, 13. (a) Jehovha anoratidza sei kuti anonzwisisa, anogona kuchinja uye ane ngoni? (b) Nei uprofita hwaJona hwaisava hwenhema?
12 Jehovha haasi chandagwinyira, kana kuti Mwari asina hanya uye ane utsinye sezvinoratidzwa nedzidziso dzevatungamiriri vezvitendero. Kusiyana naizvozvo, anonzwisisa, anogona kuchinja uye ane ngoni. Paanosarudza kuranga vakaipa, anotanga apa nyevero achishandisa vamiririri vake vari panyika, nokuti anoda chaizvo kuona vakaipa vachiita zvakaitwa nevaNinivhi—kupfidza uye kuchinja nzira dzavo. (Ezek. 33:11) Jehovha akaudza muprofita wake Jeremiya kuti: “Panguva ipi neipi yandingataura nezvorudzi uye nezvoumambo kuti ndirudzure nokuruputsa nokuruparadza, uye rudzi irworwo rukatendeuka pane zvakaipa zvarwo zvandakarunyevera, ndichazvidembawo pamusoro pedambudziko randakanga ndafunga kuita paruri.”—Jer. 18:7, 8.
Mwari anoda chaizvo kuona vanhu vakaipa vachipfidza uye vachichinja nzira dzavo, sezvakaita vaNinivhi
13 Uprofita hwaJona hwaiva hwenhema here? Kwete; nokuti hwakanyevera vanhu pamusoro pezvaizoitika dai vasina kupfidza. Nyevero iyoyo yakanga yapiwa nemhaka yenzira dzakaipa dzevaNinivhi, idzo dzakabva dzachinja. Dai vaNinivhi vaizotangazve kuita mabasa avo akaipa, Mwari aizounza mutongo mumwe chetewo pavari. Izvozvo ndizvo chaizvo zvakazoitika pave paya.—Zef. 2:13-15.
14. Jona akaita sei Jehovha paakanzwira Ninivhi ngoni?
14 Jona akaita sei Ninivhi parisina kuparadzwa panguva yaaitarisira? Tinoverenga kuti: “Asi Jona haana kumbofadzwa nazvo, akatsamwa kwazvo.” (Jona 4:1) Jona akanyengetera kuna Mwari nenzira inoita sokuti airuramisa Mwari. Jona akaratidza kuti aiva nepfungwa yekuti dai hake akaramba ari munyika yekwake. Akati akanga agara aziva kuti Jehovha aisazoparadza Ninivhi, uye akatoshandisa izvozvo sechikonzero chakaita kuti pakutanga atizire kuTashishi. Akabva akumbira kufa, achiti rufu rwaizova nani pane upenyu.—Verenga Jona 4:2, 3.
15. (a) Chii chingave chakaita kuti Jona ashungurudzike uye atsamwe? (b) Jehovha akaita sei nemuprofita wake aishungurudzika?
15 Chii chakanga chichinetsa Jona? Hatigoni kuziva zvose zvaiva mupfungwa dzake, asi tinoziva kuti Jona akaudza vanhu vose ivavo kuti Ninivhi raizoparadzwa. Vakanga vadavira zvaakataura. Asi iye zvino, rakanga risisiri kuzoparadzwa. Akatya kusekwa kana kuti kunzi muprofita wenhema here? Chero zvazvingava, haana kufara kuti vanhu vacho vakanga vapfidza kana kufara kuti Jehovha akanga aratidza ngoni. Panzvimbo pezvo, zvinoita sekuti akawedzera kutsamwa, kuzvinzwira urombo uye kunetseka kuti zita rake rainge rakanganiswa. Zvisinei, zviri pachena kuti Mwari ane ngoni waJona akanga achiri kuona chimwe chinhu chakanaka mumuprofita uyu aishungurudzika. Pane kuti arange Jona pamusana pekusaremekedza kwake, Jehovha akangomubvunza mubvunzo mumwe chete waiita kuti azviongorore wokuti: “Une chikonzero chakanaka chokutsamwa kwazvo here?” (Jona 4:4) Jona akatombopindura here? Bhaibheri harina zvarinotaura.
16. Vamwe vangasabvumirana naMwari munzira dzipi, uye tingadzidzei kubva pamuenzaniso waJona?
16 Zviri nyore kufunga zvisiri izvo nezvaJona pamusoro pezvaakaita, asi tinofanira kuyeuka kuti zvinowanzoitika kuti vanhu vasina kukwana vasabvumirane naMwari. Vamwe vangafunga kuti Jehovha aifanira kunge akadzivisa njodzi kana kuti aifanira kunge akakurumidza kuranga vakaipa kana kuti kunyange kufunga kuti aifanira kunge akagumisa kare mamiriro ezvinhu ose ari panyika. Muenzaniso waJona unotiyeuchidza kuti patisingabvumirani naJehovha Mwari, nguva dzose maonero edu ndiwo anenge achifanira kugadziriswa kwete ake.
Zvakaitwa naJehovha Kuti Adzidzise Jona
17, 18. (a) Jona akaitei abuda muNinivhi? (b) Zvishamiso zvaJehovha zvine chokuita nemupudzi zvakaita kuti Jona anzwe sei?
17 Muprofita wacho ainge aora mwoyo akabva muNinivhi ndokubva aenda, kwete kumba, asi nechekumabvazuva, kwaiva nemakomo aiita kuti akwanise kuona nharaunda yacho. Akavaka kadumba ndokugaramo kuti amirire uye kuti atarise Ninivhi. Zvimwe ainge achiri kutarisira kuona richiparadzwa. Jehovha aizodzidzisa sei murume uyu akaoma musoro kuti ave nengoni?
18 Jehovha akaita kuti mupudzi ukure neusiku humwe chete. Jona paakamuka akaona mupudzi wakasvibirira, mashizha awo achiita mumvuri waipfuura nekure wechidumba chake. Akaita seachabata denga. “Jona akatanga kufarira kwazvo” mupudzi wacho, zvimwe achiona kuvapo kwawo kunoshamisa sechiratidzo chekukomborerwa uye chekufarirwa naMwari. Zvisinei, Jehovha aida kuitira Jona zvinopfuura kungomununura kubva pakupisa uye pakutsamwa kwake kusina musoro. Aida kusvika pamwoyo paJona. Saka Mwari akaita zvimwe zvishamiso. Akatuma gonye kuti rirume uye riuraye mupudzi wacho. Akabva atuma “mhepo inopisa yokumabvazuva” kusvikira Jona atanga “kupera simba” nemhaka yekupisa kwacho. Murume wacho akasuruvara zvikuru, uye akakumbirazve kuna Mwari kuti afe.—Jona 4:6-8.
19, 20. Jehovha akakurukura sei naJona nezvemupudzi?
19 Jehovha akabvunzazve Jona kana aiva nechikonzero chakanaka chokutsamwa, panguva ino nemhaka yekufa kwemupudzi wacho. Pane kuti apfidze, Jona akazviita munhu akarurama, achiti: “Ndine chikonzero chokutsamwa kwazvo, kusvikira pakufa.” Iye zvino yakanga yava nguva yekuti Jehovha anyatsotsanangura chidzidzo chacho.—Jona 4:9.
Mwari akashandisa mupudzi kuti adzidzise Jona kuva nengoni
20 Mwari akakurukura naJona, achitaura kuti muprofita wacho ainzwa urombo nemhaka yekufa kwemupudziwo zvawo wakanga wakura neusiku humwe chete, uyo Jona akanga asina kudyara kana kuita kuti ukure. Mwari akabva apedzisa achiti: “Ini, ndaisafanira kunzwira urombo Ninivhi guta guru, mune vanhu vanopfuura zviuru zana nemakumi maviri vasingambozivi musiyano woruoko rwavo rworudyi noruboshwe rwavo, tisingaverengi zvipfuwo zvizhinji here?”—Jona 4:10, 11. *
21. (a) Jehovha akashandisa muenzaniso upi kuti adzidzise Jona? (b) Nyaya yaJona ingatibatsira sei kuti tizviongorore nokutendeseka?
21 Unonzwisisa here kuti Jehovha ainyatsorevei nemuenzaniso uyu? Jona haana kana zvaakanga amboita kuti atarisire mupudzi iwoyo. Asi Jehovha ndiye aiva Tsime reupenyu hwevaNinivhi ivavo uye akanga avatsigira sezvaanoita zvisikwa zvese zviri panyika. Jona aizokoshesa sei mupudzi mumwe chete kupfuura upenyu hwevanhu 120 000, kusanganisira zvipfuwo zvavo zvese? Hakusi kuti here Jona ainge ave kungozvifunga iye chete? Chaizvoizvo, akanzwira urombo mupudzi wacho nekuti chete wainge wamubatsira. Kutsamwira kwake Ninivhi kwaisakonzerwa nevavariro dzaivawo dzokungozvifunga here—kuda kutanda nyadzi, kuti anzi akarurama? Nyaya yaJona inogona kutibatsira kuti tizviongorore nokutendeseka. Ndiani wedu asingambovi neunhu hwakadaro hwokungozvifunga? Chokwadi tinofanira kuonga kuti Jehovha anotidzidzisa nemwoyo murefu kuti tiwedzere kufungawo vamwe, kuva netsitsi, uye kuva nengoni saiye!
22. (a) Jona akabatsirwa sei nemirayiridzo yaJehovha yeuchenjeri ine chokuita nengoni? (b) Chidzidzo chipi chatinofanira kudzidza tose?
22 Mubvunzo ndewokuti, Jona akadzidza here kubva pane zvose izvi zvakaitika kwaari? Bhuku rine zita rake rinopera nemubvunzo waJehovha usina kupindurwa. Vamwe vatsoropodzi vanganyunyuta kuti Jona haambopinduri. Zvisinei, chokwadi ndechokuti mhinduro yake iripo. Bhuku racho ndiro mhinduro yacho. Unoonaka, uchapupu hunoratidza kuti Jona ndiye akanyora bhuku rine zita rake. Chimbofungidzira muprofita iyeye, avazve munyika yekwake akachengeteka, achinyora nyaya iyi. Tinoita setinoona murume ati kurei, ati chenjerei, ati wedzerei kuzvininipisa achizunguza musoro wake achizvidemba sezvaanorondedzera zvikanganiso zvake, kupanduka kwake, uye kuomesa kwake musoro achiramba kuratidza ngoni. Zviri pachena kuti Jona akadzidza chidzidzo chinokosha kubva pamirayiridzo yaJehovha yeuchenjeri. Akadzidza kuva nengoni. Ndozvatichaita here?—Verenga Mateu 5:7.
^ ndima 6 Zvave zvichifungidzirwa kuti Samariya, guta guru reumambo hwalsraeri hwemadzinza gumi, ringangodaro raiva nevanhu vanenge 20 000 kusvika ku30 000 muzuva raJona—vasingasviki chikamu chimwe chete muzvina chevanhu vekuNinivhi. Panguva yarainge rakabudirira zvikuru, guta reNinivhi ringangodaro raiva iro guta guru pane ose panyika.
^ ndima 8 Izvi zvingaita sezvisingaitiki, asi zvakanga zvamboitika munguva dzekare. Munyori wenhau dzakaitika wechiGiriki, Herodotus, akanyora kuti vaPezhiya vekare vakachema rufu rwemumwe mukuru mukuru aifarirwa nevakawanda vachibatanidza zvipfuwo zvavo mutsika dzavo dzekuchema.
^ ndima 20 Mwari paakati vanhu ivavo vaisaziva rudyi kana ruboshwe rwavo zvaipa pfungwa yekuti vaiita sevana vaduku pakusaziva zvinodiwa naMwari.
Jona akaratidza sei kutenda uye ushingi sezvaaiparidza muNinivhi?
Tingadzidzei pakupfidza kwakaita vaNinivhi?
Tingadzidzei kubva pamafungiro akaratidzwa naJona pakupfidza kwakaita vaNinivhi?
Ungada kutevedzera kutenda kwaJona munzira dzipi paunoruramiswa?